ए मेरो हजुरको क्रेडिट कसलाई ? (भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
ए मेरो हजुरको क्रेडिट कसलाई ? (भिडियो)
फिल्मी फण्डा । प्रदर्शनको संघारमा रहेको ए मेरो हजुर २ को चर्चा अहिले तिब्र रुपमा भईरहेको छ । पुराना अभिनेत्री झरणा थापाले यसै फिल्म मार्फत निर्देशन यात्रा तय गरेकी हुन् । यसो त यो फिल्मसँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिन्छ अर्थात ए मेरो हजुर का कलाकारद्धय स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र नायिका झरणा थापा । यसकै सिक्वेल भएको कारण पनि यो फिल्म प्रति दर्शक आशावादी हुनुको सम्बन्ध रहेको छ ।
अर्को अर्थमा फिल्मका कलाकार सामाज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको फ्यान फलोअरले पनि रुचाउने देखिन्छ । डेब्यु नायक तथा नव प्रवेशी कलाकार सलिनमान बाँनियालाई फिल्मको प्रचार सामाग्रीमा निकै रुचाईएको छ । यस कारण फिल्म सफल हुने तरखरमा रहेको छ । तर फिल्मको क्रेडिट कसलाई बढि जान्छ त ? हुन त समग्र फिल्म युटिन क्रेडिटका पात्र हुन् तर पनि निर्देशक झरणा थापा, नायिका साम्राज्ञी र नव नायक सलिनमान अहिले यसै चलचित्रले बढि चर्चामा रहेका पात्रहरु हुन् । जस कारण पनि दर्शकहरुे आ–आफ्नो विचार पोखिरहेका छन् । फलाने पात्रको कारणले यो फिल्म बढि चल्छ भने तर त्यो हिसाब किताब भने प्रदर्शन पछि नै थाहा होला ।
साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह नेपाली दर्शक माँझ छोटो समयमै लोकप्रिय भएकी अभिनेत्री हुन् । दोस्रो फिल्ममा रिलिजको सँघारमा हुँदा साम्राज्ञीको चर्चा सिने वृतमा खुबै छ । डेब्यु फिल्ममा अनमोल केसीसँग स्क्रिन शेयर गरेकी यी अभिनेत्रीले दोस्रो सिनेमा ए मेरो हजुर २ मा सलिनमान बानियाँसँग जोडी बाँधेकी छन् । यस्तै ए मेरो हजर २ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेका सलिनमानलाई दर्शकले राइजिङ स्टारको ट्याग भिराईसकेका छन् । सिनेमा रिलिज नहुँदै दर्शकको रोजाई परेका यी ह्याण्डसम ठिटोलाई ए मेरो हजर २ मा साम्राज्ञीसँग जोडी जमेको देख्न सकिन्छ । फिल्म भाद्र १६ गतेबाट प्रदर्शन हुदैछ ।